पाल्पाका ६,अर्घाखाँचीका ९७,गु्ल्मीका ३ सहित विहिबार थपिएका संक्रमित ६७१ जना कहाँका कति?
> पाल्पाका ६,अर्घाखाँचीका ९७,गु्ल्मीका ३ सहित विहिबार थपिएका संक्रमित ६७१ जना कहाँका कति?
४ असार २०७७, बिहीबार १७:३८
काठमाडौं, ४ असार । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ७ हजार ८४८ पुगेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आजकाे नियमित पत्रकार सम्मेलनमा थप ६७१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएका हुन् ।
देशका विभिन्‍न प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षणअनुसार विहिवार एकैदिन ६७१ कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा परिएको परीक्षणमा झापाका २ जना र मोरङका २ जनामा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछाममा ४२, बाजुराका ४१ जना, भक्तपुरका ३ जना, डडेल्धुराका ८४ जना कैलालीका २१ जना कपिलवस्तुका १६ जना, काठमाडौंका २ जना, बैतडीका २५ जना, नुवाकोटका २ जना, रौतहटका ३४, रुपन्देहीका ३ जना, सर्लाहीका ३, ललितपुरका १, नवलपरासीका १ र महोत्तरी १ जनामा समेत कोरोना संक्रमण पाइएको छ।
टेकु अस्पतालको प्रयोगशालामा सिन्धुलीका १ जना महिला समेत संक्रमित भएकी छन्।
भरतपुर अस्तपालको प्रयोगशालामा पर्वतका ५ जना चितवन र नवलपरासी पूर्वका १-१ जनामा समेत कोरोना संक्रमण पाइएको छ।
यस्तै धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका २९ जना, बागलुङका १ जना, मनाङका १ जना, पूर्वी नवलपरासीका ३० जना, स्याङ्जाका ९ जना, पर्वतका ४ जना, तनहुँका १५ र गोर्खाका ११ जना संक्रमित भएका छन्।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गुल्तमीका ३ जना, कपिलवस्तुका १ जना, पाल्पाका ६ जना, रुपन्देहीका ७ जना, रोल्पा र नवलपरासीका १ जना छन्। यस्तै सोही प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका ९७ जनामा समेत कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ।
भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका ३ जना बर्दियाका ३ जना, कैलालीका र दैलेखका १-१ जनामा समेत कोरोना संक्रमण पाइएको छ।
यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका ४ जना समेत कोरोना संक्रमित पाइएका छन्।
सुर्खेतस्थित प्रयोगशालामा दैलेखका ८६ जना र सुर्खेतका ३४ जना कोरोना संक्रमित पाइएका छन्। सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा अछामका २ जना, बझाङका २ जना, कपिलवस्तुका २ जना, कैलालीका २० जना, र डोटीका ५ जनामा समेत कोरोना संक्रमित पाइएका छन्।
आजमध्ये ८० जना महिला हुन् भने ५ सय ९१ जना पुरुष हुन्। आज थपिएकासहित नेपालमा संक्रमितको संख्या ७८४८ पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार हालसम्म देशका ७४ जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा बिहीबारसम्म २२ जनाको भने कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।